Burmese taste - Iora: အမြန်ချက်ထောပတ်ထမင်းနဲ့ ကျန်ဖြတ်လိုက်ဖက်ဟင်းများ
အုန်းထမင်းချက်စားပြီး ဟင်းတွေကျန်နေတာနဲ့ ထောပတ်ထမင်းချက်စားလိုက်တာပါ။
အမြန်နည်းဆုိုတဲ့အတုိုင်း ကုိုယ့်မှာ ရှိနေတဲ့ မာဂျရင်းထောပတ်ကို ဆီနဲနဲနဲ့ ကရဝေးရွက်နဲနဲ၊ သစ်ဂျပိုးခေါက်နဲနဲ နဲ့ ဆီသတ်လိုက်ပါတယ်။ မွှေးလာပြီး ထောပတ်မတူးသွားခင် ဆေးထားတဲ့ ဆန် (ရုိုက်စ်ကွတ်ကာထဲကုို) ထဲကို ထဲ့လုိုက်ပါတယ်။ စိပ်ထားတဲ့ ကြက်သွန်နီစိပ်၊ စပျစ်သီးခြောက် (အ၀ါဘဲကြိုက်ပါတယ်။ အညို နှစ်သက်ရင်အညိုထဲ့)သကြားနှစ်သက်သလောက်၊ ဆားနဲနဲ၊ ထဲ့မွှေပြီး ချက်နေကျထက်ရေနဲနဲလေးပိုထဲ့ပါ။ ကျမ ချက်နေကျအတုိုင်းထဲ့လိုက်တာ မာသွားလို့ ရေနွေး တောက်ပြီး ပြင်ပေးလိုက်ရပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် ပုံထဲကလိုမျိုး ဆန်သားမလှဘဲ နဲနဲ ကျိူးသွားပါတယ်။ ဆန်သားလေးစင်းနေမှလှပါတယ်။ ခုတော့သီးခံပေအုန်းတော့ ဘော်ဒါတုို့ ရေ။
ပြောခဲ့တဲ့အတုိုင်း အုန်းထမင်းချက်စားတုန်းက ကျန်နေတဲ့ ကြက်သားဟင်းကို လိုက်ဖက်ပြီး စားချင်စဖွယ်ဖြစ်အောင် မော်ဒီဖုိုင်းလုပ်ပါတယ်။ အရင်ချက်ထားတာက မြန်မာချက်ပါ။ ဟင်းတမျိုးထဲကို ဆက်စားရတာမုန်းတော့ အင်ဒီးယန်းစတိုင်ဖြစ်အောင်လို့ မဆလာတုို့ ၊ ဇီယာတို့ ၊ ထဲ့ပြီး ပြင်ပါတယ်။ ကြက်သွန်နီကြော်တွေကို မဆလာနဲ့ ရောပြီး မှ ရေဆူထဲ့ထားတဲ့ ကြက်သားဟင်း ထဲကို ရေမခန်းတခန်းမှာ ထဲ့ပြီး အဖုံးအုပ်ပေးထားလိုက်ပါတယ်။ ရေလဲခန်း ကြက်သွန်ကြော်တွေလည်း အိပြီးမွှေးလာတော့ ကြက်သားအတုံးတွေ နဲ့ သာသာလေးမွှေပေးထားတာပါ။
အသီးအရွက်လည်းပါအောင် လို့ ရေခဲသေတ္တာထဲမှာ ရှိနေ တဲ့ အသီးအနှံတွေကို မန်ကျည်းရည်တုို့ မဆလာတို့ ထဲ့ပြီး ခပ်ပျစ်ပျစ်ချက်လိုက်ပါတယ်။ အာလူး၊ ခရမ်း၊ ရုံးပတေ၊ ငရုတ်သီးစိမ်းထဲ့ပြီး မုန်ညင်းစေ့ နဲ့ ဇီယာကို အနှစ်ဆီသတ်ချိန်မှာ ထဲ့ပြီး ဆီသတ်ပါတယ်။ ဆီသတ်ပြီးတော့ မာတာတွေ အရင်ထဲ့ ပျော့တာတွေ နောက်ထဲ့ အားလုံးထဲ့ပြီးတော့ ရေဆူထဲ့ အချဉ်ရည်ထဲ့ အရသာပြင်ပြီး အရည်နဲနဲလေးကျတော့ ရှမ်းနံနံအုပ်ပြီးချပါတယ်။
၀က်သားပြုတ်ကြော်ကျန်တာကိုလည်း ဆီနဲ့ အပေါ်ယံကျွတ်ပြီး ရဲလာအောင်ထပ်ကြော်ပါတယ်။ ၀က်သားကြော်ကိုလည်း သိပ်ကြိုက်ပါတယ်။ (ပါရမီဖြည့်ဘက်လေးရဲ့ မေမေကြော်ပေးလိုက်တဲ့ ၀က်သားကြော်တွေ့ ပြီး ဆက်တုိုက်ကြော်စားဖြစ်နေပါတယ်။ ငယ်ငယ်က အမဲသားစားတုန်းကဆုို အမဲကြော်သိပ်ကြိုက်ပေါ့။
ငရုတ်သီးကတော့ အရင်ထဲ့တာဘဲ။း)
ဘာလချောင်ကြော်လည်း လက်ကျန်ဘဲ။ ဗက်ဂျီကလွဲရင် အားလုံး ကျန်ဖြတ်ဟင်းတွေပါ။
အိုးလိုက်ချထားတယ်နော်။ ဆန်တွေကမာသွားလို့ ရေတောက်ပြီး နှပ်ထားရလို့ ကျိုးနေတယ်။ မလှဘူးနော်။ ခွင့်လွှတ်။
အလင်းရောင်ရတဲ့ ပြူတင်းပေါက်နားမှာ လာရုိုက်တော့ လေတုိုက်လို့ ဟင်းတွေကပုိုအေးပြီး ရုိုက်နေရင်းနဲ့ ကို အပေါ်ယံတွေတင်းပြီး မလှတော့ဘူး။
နောက်နေ့ ကျတော့ မုန်ညင်းစိမ်းကြော်နဲ့ တွဲစားပါတယ်။ (ဓါတ်ပုံရုိုက်ချင်ရင် ပေါက်ကရတင်ထားတဲ့စားပွဲကို ရှင်းရတာတလုပ်။ တခါတခါကျတော့ ဘေးကိုတွန်းပြီးဘဲ ရုိုက်လိုက်တော့တယ် စိတ်မရှည်လို့ ။ ဘုရားစာအုပ်၊ မျက်မှန်၊ လက်သဲညှပ်၊ လက်သဲဆုိုးဆေး၊ သွားကြားထုိုးတံ၊ဖုန်း၊ အားသွင်းတဲ့ဖုန်းကြိုး၊ ကွန်ပြူတာနဲ့ ဆက်တဲ့ကင်မရာကြိုး၊ဘာကြိုးညာကြိုး၊ လက်တော့၊ချာဂျာ၊ ဓါတ်ခဲ၊ သော့တွဲ၊ ဘောပင်၊ ပြေစာ၊ဟုိုအထုတ်ဒီအထုတ်၊ အထင်ကြီးစရာတော့တခုမှမပါဘူးရယ်)
မလိုင်လုံးပျက် မလိုင်တုန်း (ရုို့ စ်ရဲ့ မလိုင်လုံးလုပ်နည်းဖတ်ပြီး နောက်နေ့ ကျတော့လုပ်ထားတာ။ ဆရာကတော်ပေမဲ့တပည့်ကချာတော့ ကျဲသွားလို့ ကုိုယ့်နည်းကိုယ့်ဟန်နဲ့ ဖုတ်လိုက်တဲ့ မလိုင်လုံးပျက်မုန့် ပါ။ ဖြစ်သမျှအကြောင်းတော့ ရုို့ စ်ရဲ့ ဟလ၀ါလုပ်တဲ့ ပို့ စ် မှာမန့် ထားပါတယ်ရှင်။ သင်ခန်းစာလိုချင်သူများသွားကြည့်နုိုင်ပါကြောင်း။
မပျင်းမရိ လာရောက်အားပေးသွားလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
Posted by Iora at 7:37 PM
Labels: Chicken, Pork, Rice, Veggie
Love it, love it, love it!!! Just discussing with my other half what we need to buy to cook those dishes, hehe.
Iora November 11, 2011 at 9:56 PM
တင်လာမဲ့ ပို့ စ်ကုိုမျှော်နေမယ်နော်။
ပွက်နေတဲ့ အချိန်မှာ ထမင်းအိုးကို တချက်လောက်သာသာမွှေလိုက်ရင် ပိုကောင်းမယ်သိလား။ သူတို့ တွေ ရှိတော့ ကိုယ်တို့ လည်း စမ်းသပ်လိုစိတ်တွေ တုိုးတာပေါ့ကွယ်။း)))
rose November 11, 2011 at 10:27 PM
Hehe... Sis, your Gulab Jamun (ma lai lone) look like brownies. Don't be disappointed naw. I'll buy ingredients for malai lone and post it step by step with photo.
ဘေဘီ November 12, 2011 at 2:14 AM
သွားဝယ်ပါ။ ပြီးရင် အချိုးစားတိုင်းလုပ်ကြည့်ပါ
တနေ့နဲ့တနေ့ ချက်တဲ့ အရသာချင်းမတူကြဘူးလေ
ဒါက ကိုယ်တခါမှ လုပ်စားဖူးတာ မဟုတ်ဖူး
ကိုယ်ဆို လက်တည့်စမ်းပြီး ပြစ်လိုက်ရတဲ့
မုန့်တွေ တပုံကြီးရယ်း( ရာစ့်မလိုင်က သူ့ထက်ပိုကောင်းတယ်
ဆီမှာ ကြောာ်စရာမလိုတော့ ကယ်လိုရီနဲနဲလျော့တာပေါ့
အဆင်ပြေပါစေ ကိုယ့်အိမ်က အချိုတွေ သိပ်မစားလို့ မလုပ်ဖြစ်တား)
ကုလားဆိုင်တွေမှာ Gulab Jamun ဘယ်ဟယလည်း မေးပြီးဝယ်လို့ရပါတယ်
ပါရမီဖြည့်ဖက်လေး November 12, 2011 at 4:09 AM
အမြန်ချက်နဲ့ ကျန်ဖြတ်ဟင်းလေးတွေကလည်း ရှယ်ပဲ။ ၀က်သားကြော်ကတော့ ညီမလည်း သိပ်ကြိုက်။ သီးစုံဟင်းလေးလည်း စားချင်စရာ။ ဗိုက်ဆာလာပြီ။ :)
အပြုံးပန်း November 12, 2011 at 5:21 AM
ကြက်သားကို အဲဒီလိုလေး ခြောက်ခြောက် ချက်တာ ကြိုက်တယ်။
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) November 12, 2011 at 5:38 AM
သို့သော် သူများထမင်းလာကြည့်ပြီး အားငယ်လိုက်တာ
ဝက်သားကြော်လည်း မြင်တာနဲ့ စားချင်စရာမို့ ဗိုက်တောင် ဆာလာရတယ်..
မလိုင်လုံး မဟုတ်တဲ့ မလိုင်ပြားကိုလည်း မြည်းသွားတယ်.. ပြားနေပေမဲ့ အရသာ ကောင်းပါတယ်..
ကောင်းမွန်ဝင်း November 12, 2011 at 6:52 AM
အဲလိုဟင်းသီးဟင်းရွက်စုံကို သတ်သတ်လွတ်ကုလားဆိုင်တွေမှာစားဘူးတယ်။ နံမည်မေ့သွားပြီ။ ဘာဂျီးကြော်ဆိုလား။
ကျန်ဖြတ်ကို ကျန်ဖြတ်မှန်းမသိအောင် ချက်တာတာလည်း ပညာပဲနော်။
Nyi Linn Thit November 12, 2011 at 12:05 PM
ဝက်သားကြော် ကြိုက်သူချင်းတော့ တွေ့နေပြီဗျို့..၊ ကျန်ဖြတ်ဟင်းဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်ကို ကြည့်ကတည်းက ကြိုက်သွားတာ..၊ ကြိုက်တာ ကျန်ပစေ၊ ဖြတ်မယ်ဆိုတဲ့ သဘောပေါ့၊း) သွားရည်ကျစရာ ပုံတွေငေးရင်း ထမင်းပန်းကန်ထဲက ငရုတ်သီးတောင့်ကို တွေ့ဖြစ်အောင် တွေ့သွားသေးတယ်..။း)
rose of sharon November 12, 2011 at 8:45 PM
Vista November 12, 2011 at 8:59 PM
ရှလွတ် .. ကျန်ဖြတ်ပေမို့ ပဲ စုံနေတာပဲ မလိုင်ပျက်လေးကလည်းစားကောင်းမယ့်ပုံ
မြတ်ကြည် November 12, 2011 at 11:15 PM
မလိုင်တုံးလေး ပေးမြည်း ပါ။
Iora November 13, 2011 at 10:10 AM
ကျေးဇူးပါ။ ဒါပေမဲ့တမင်သက်သက်ကြီးတော့မ၀ယ်ပါနဲ့ နော်။ နောက်တကြိမ်စားဘို့ လုပ်တော့မှ တင်ပေးပေါ့နော်။ အရသာကတော့ကောင်းပါတယ် ဘာမှန်းသာမသိတာ။ ကြက်ဥပါသွားတာနဲ့ ဘိတ်က်လိုက်တာ ကွာသွားတာပေါ့..ဟီးဟီး
စိတ်ဓါတ်ကတော့မကျသေးဘူး။း)သိပ်မပစ်ရသေးလို့ ။ နောက်ထပ်ရယ်ဒီမိတ်ကိတ်လုပ်တဲ့အထုပ်ဝယ်လာပြီးလုပ်တာ ကွက်တိဘဲ။ အချိန်လည်းမကုန်တော့သဘောတွေကျနေတာ။ ကုလားဆိုင်သွားတုိုင်း လျှောက်ဝယ်တာဘဲ။ သူကအချုိုကြိုက်လို့ လေ။
ဟုတ်ပါ့ဘေဘီရေ..ချက်နေကျမြန်မာဟင်းတောင်တခါတလေ စိတ်ကတခြားရောက်သွားရင် ပေါက်ကရကဖြစ်သွားတာ။ ရာ့စ်မလိုင်ကိုမှတ်ထားလိုက်ပြီ။း))
ဟုတ်တယ် သီးစုံဟင်းလေးပါတော့ ပိုစားလို့ ကောင်းသွားတယ်။ နို့ မို့ ရင်အီနေမှာ။
ဟုတ်တယ်။ တခါတခါ အဲလို ခြောက်ခြောက်လေးသိပ်စားချင်တယ်။ ခြောက်အောင်တမင်လုပ်ပြီးစားရင်တော့ကြိုက်ပြီး သူ့ ဟာသူခြောက်သွားရင်တော့ ကြိုက်ပြန်ဘူး။း)
အုန်းထမင်းက အုန်းသီးနဲ့ လုပ်ထားတော့ပိုကောင်းမှာသေချာပါတယ်။
တချို့ ဆုို ဟင်းအများကြီးနဲ့ မစားဘူး။ အမဲကြော်တို့ ဘာတို့ နဲ့ လည်းစားတာပါဘဲ။
မလိုင်ပြားက မကြော်လိုက်ဘဲ စပျစ်သီးခြောက်ထဲ့ဖုတ်လိုက်ပြီး လှီးလိုက်တော့မလိုင်လုံးမဖြစ်ဘဲ မလိုင်လုံးပျက် သို့ မဟုတ် မလိုင်တုံး သို့ မဟုတ် မလိုင်ပြားဖြစ်သွားတာပေါ့ကွယ်။ မြီးသွားလို့ ကျေးဇူး။ ဝေးနေတာကံကောင်းတယ်မှတ်။ ဟင်းဟင်း
ကိုယ်တုို့ အိမ်မှာတော့ အသီးအရွက်တွေကို မဆလာတို့ ငရုတ်သီးတုို့ နဲ့ ကြော်တာကို ဘာဂျီကြော်လို့ ခေါ်တယ်။ ဘကြီးကြော်တာတော့မှုတ်ဖူးနော်..း) ရေးတာနဲ့ လာဖတ်ဖြစ်မှာပါ။ မဖတ်ရသေးတာဆုိုမှတ်ထားပြီး အချိန်ရတာနဲ့ သွားဖတ်တာဘဲ။
ကျမတို့ တော်တော်အကြိုက်တူကြတယ်။ ၀က်သားကြော်တုို့ ၊ ငရုတ်သီးတို့ လေ။ အဲလိုပုံစံမပြောင်းရင် ကျမကိုယ်တိုင်က ထပ်မစားချင်ဘူး။ ပုံစံမပြောင်းရင်ကျန်တာကို မဖြတ်နုိုင်ဘူးကိုညီလင်းသစ်ရေ။း))
ရုို့ စ် အော့ဖ် ရှယ်ရွန်း..
ကျွမ်းတယ်တော့မဟုတ်ပါဘူး တမျိုးတည်း အကြာကြီးမစားချင်လို့ လျှောက်လုပ်ဖြစ်တာပါ။ ဒါပေမဲ့ အသွင်ပြောင်းလိုက်တော့ မပစ်ရဘဲ ဟင်းဖြစ်သွားတာပေါ့လေ။ နော်။
ကျန်ဖြတ်ဆိုမှတော့ စုံပြီပေါ့ ဗစ်ရယ်။ မလိုင်ပျက်လေးလည်း ချော့ကြွေးနေရတယ်သူ့ ကို။
အုိုး..မမြည်းနဲ့ အကုန်ယူသွားရင်..အိမ်ထိလုိုက်ပို့ ပေးမယ်နော်။...း))
Kyaw Hnin Se Lwin November 13, 2011 at 4:10 PM
ပြီးတော့မလိုင်လုံးပျက် မလိုင်ပြားလေးက ပိုတောင်ချစ်ဖို့ကောင်းသွားသလိုပဲ
Iora November 13, 2011 at 5:34 PM
လာလည်လို့ ကျေးဇူးပါ။ အားတဲ့အခါထပ်လာလည်ပါအုန်းလို့ ။
စားလို့ တော့ကောင်းပါရဲ့rich ဖြစ်တာတွေစားတာများနေလို့ ပြန်သတိထားနေရတယ်လေ။
မလုိုင်လုံးပျက်လေးကို ချီးကျူးသွားလို့ ပျော်သွားပြီ။း)
barbielay November 14, 2011 at 5:45 AM
တ၀ကြီးစားသွာတယ် မမ ရေ ထောပတ်ထမင်းချက်နည်းလေးလည်းယူသွားတယ်
san htun November 14, 2011 at 7:18 PM
လက်ကျန်ဖြတ်တဲ့ ဟင်းတွေကလည်း စုံလှချည်လား...ဓာတ်ပုံတွေက ရေလည် မိုက်တယ်..ကင်မရာ ဘာအမျိူးအစားလဲဗျ...
mstint November 14, 2011 at 8:53 PM
မော်ဒီဖိုင်းလုပ်ထားတဲ့ ကျန်ဖြတ်ကြက်သားမဆလာချက် အကြိုက်ဆုံးး)
အားပေးသွားတယ် Iora ရေ။
Iora November 14, 2011 at 11:18 PM
လာလည်လို့ ကျေးဇူးပါ။ ထောပတ်ထမင်းက ဒီု့ က သိပ်အနံ့ ပြင်းတာမကြိုက်လို့ ဒါတွေဘဲထဲ့ပေမဲ့ တချို့ က ဇီယာတို့ ဖာလာတို့ လေးညှင်းတို့ ပါထဲ့တတ်ကြပါတယ်။ ကိုယ်ကတော့ ဒီလိုအနံ့ ခပ်ပျော့ပျော့ဘဲ သဘောကျလို့ ပါ။ ဒါတောင်မှ တအားမွှေးနေတယ်။
ရော်..လက်ကျန်ဆိုမှတော့ စုံပြီပေါ့။ ဟုိုဟာနည်းနည်း ဒီဟာနည်းနည်းလေ။ ဒို့ ကဓါတ်ပုံတွေရုိုက်ရတာခုနောက်ပုိုင်း မကြိုက်လို့ ကင်မရာအသစ်ဝယ်မလို့ စဉ်းစားနေတာကြာပြီ။ လျှော့ဈေးစောင့်နေတာ။ ခုရုိုက်နေတာက လွန်ခဲ့တဲ့ ရနှစ်လောက်က ဒစ်ဂျစ်တယ်တွေ စသုံးခါစလောက်က၀ယ်ထားတာ။ Minolta digital camera ပါ။
အကြိုက်ဆုံးဆုိုရင်တော့ သုံးဆောင်သွားပါအုန်းရှင်။ အားပေးသွားတော့ ပျော်တာပေါ့။ ပေးတဲ့ဆုနဲ့ အမြဲပြည့်ပါရစေ။ တီတင့်လည်း စိတ်ဓာတ်အစဉ်ကြည်လင်အေးမြပါစေ လို့ ပြန်လည်ဆုတောင်းပေးပါတယ်ရှင်။
jasmine(တောင်ကြီး) November 15, 2011 at 8:45 AM
T T Sweet November 15, 2011 at 5:44 PM
အိမ်မှာ အုန်းထမင်းပြီးတော့ ထောပတ်ထမင်း လာဦးမယ်နဲ့တူတယ်နော်။ မော်ဒီဖိုင်းတာတွေတောင် ဒီလောက်ကောင်းနေပြီ ...
Iora November 15, 2011 at 6:12 PM
ကုိုယ်လည်း သိပ်တော့မချက်စားဖြစ်ပါဘူး။ ပြောမယ်ဆုိုရင်ဒန်ပေါက်ကုိုဘဲပိုချက်စားဖြစ်ပါ
တယ်။ မနေ့ ကစာတွေလာဖတ်ခဲ့သေးတယ် ဂျက်စ်စီမှာ။ နက်ဖန်လည်းလာကြည့်လုိုက်ပါအုန်းမယ်။
ချစ်ချစ်ခင်ခင် ဂျက်စမင်ဆုိုတာနဲ့ လိုက်အောင်..
ကြင်ကြင်နာနာအုိုင်အိုရာ လို့ ပြောရကောင်းမလား။
ဒါမှမဟုတ် အရည်မရအဖတ်မရတွေရေးတဲ့ ချာတိချာတာ အိုင်အိုရာ ....လို့ ပြောရကောင်းမလား။း))))))
Iora November 15, 2011 at 6:33 PM
အဆီအအိမ့်တွေများနေလို့ သတိထားနေရတယ်။း)
ကုိုယ့်ပြဿနာက ဟင်းကျန်မော်ဒီမဖုိုင်းရင်အီစကုိုကမစားတော့ဘူး။ သူကအသားဆုိုပြီးရောစားသေးတယ်။ ရန်ကုန်မှာဆုိုကျန်ဖြတ်ရှင်းမဲ့သူကပေါတယ်။ ရုံးသွားလည်း ဟင်းတွေအများကြီးယူသွားတော့ ကျန်မှာသိပ်မပူရဘူး။ ပြီးတော့ ကုိုယ့်ရဲ့ အိမ်အကူက ပျော်ပျော်ကြီးရှင်းတော့ ပြဿနာမရှိဘူး။ ဒီမှာအသွင်မပြောင်းရင် ကုိုယ်ဘဲသိမ်းရ၊ ပြန်နွှေးရ နဲ့ ဆေးစရာတွေပို၊ ရေခဲသေတ္တာကြပ်နဲ့ ရှုပ်ရှက်ကိုခပ်နေတော့တာ။
မီးမီးငယ် November 18, 2011 at 12:20 PM
Iora November 19, 2011 at 9:48 PM
ကနစ်..ကနစ်..(သီးသွားတယ်ဆုိုလို့ )း)
Feel free to visit my homepage Friday Canon Rebel T3i